Iindaba - Izinto eziluncedo kwiivalvu zeplastiki?
Izinto eziluncedo kwiivalvu zeplastiki?
Njengoko umlinganiselo wemibhobho yeplastiki kunikezelo lwamanzi ashushu nabandayo kunye nezicelo zobunjineli bemibhobho yemizi-mveliso iqhubeka nokukhula, ulawulo lomgangatho weevalvu zeplastiki kwiinkqubo zemibhobho yeplastiki luya lubaluleke ngakumbi nangakumbi.
Ngenxa yeenzuzo zobunzima bokukhanya, ukuxhathisa kwe-corrosion, i-non-adsorption of scale, ukudibanisa okudibeneyo kunye nemibhobho yeplastiki, kunye nobomi benkonzo ende yeevalvu zeplastiki, iivalvu zeplastiki zisetyenziselwa ukubonelela ngamanzi (ingakumbi amanzi ashushu kunye nokufudumeza) kunye nolunye ulwelo lwamashishini. Kwinkqubo yokubhobhoza, izibonelelo zokusetyenziswa kwayo azifani nezinye iivalve. Okwangoku, kwimveliso kunye nokusetyenziswa kweevalvu zeplastiki zasekhaya, akukho ndlela inokuthenjwa yokulawula, okubangela umgangatho ongalinganiyo weevalvu zeplastiki zokubonelela ngamanzi kunye nolunye ulwelo olusetyenziselwa ushishino, okubangela ukuvalwa kwe-lax kunye nokuvuza kwizicelo zobunjineli. Ngokukrakra, kuye kwakha inkcazo yokuba iivalve zeplastiki azikwazi ukusetyenziswa, ezichaphazela uphuhliso olupheleleyo lwezicelo zemibhobho yeplastiki. Imigangatho yelizwe lam yelizwe lam kwizivalo zeplastiki ikwinkqubo yokuqulunqwa, kwaye imigangatho yemveliso kunye nemigangatho yendlela iqulunqwe ngokuhambelana nemigangatho yamazwe ngamazwe.
Ngamazwe ngamazwe, iintlobo zeevalvu zeplastiki ziquka ikakhulu MF IBHOLA valve, ivelufa butterfly, iivalve zokutshekisha, iivalve zediaphragm, iivalve zesango kunye nevalve yokuvala. Iifom eziphambili zesakhiwo zineendlela ezimbini, ezintathu kunye neendlela ezininzi. Izinto ekrwada ikakhulu ABS, PVC-U, PVC- C, PB, PE, PP kunye PVDF njl.
Kwimigangatho yamazwe ngamazwe yeemveliso zevalvu zeplastiki, eyokuqala kukufuna imathiriyeli ekrwada esetyenziswa ekuvelisweni kweevalvu. Umvelisi wezinto eziluhlaza kufuneka abe negophe lokungaphumeleli kwe-creep elidibana nemigangatho yeemveliso zemibhobho yeplastiki ; kwangaxeshanye, uvavanyo lokutywina kunye nomzimba wevalvu yeevalvu zeplastiki ziyafuneka. Uvavanyo, uvavanyo lwexesha elide lomsebenzi wevalve edibeneyo, uvavanyo lwamandla okukhathala kunye ne-torque yokusebenza zonke zichaziwe, kwaye ubomi benkonzo yoyilo lwevalve yeplastiki esetyenziselwa ukuthutha ulwelo kwimizi-mveliso yiminyaka engama-25.